ကွာရှင်းဟိုတယ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Drama, Essays.. » ကွာရှင်းဟိုတယ်
Posted by etone on Sep 6, 2010 in Drama, Essays.., Short Story | 14 comments
သူနဲ့သူမ မင်္ဂလာဆောင်တာ (၁၀)နှစ်တင်းတင်း ပြည့်ခဲ့ပြီ။ လင်မယားနှစ်ယောက်ကြားမှာ ဘာစိတ်လှုပ်ရှားမှုမှ မရှိတော့သလို စိတ်ဝင်စားမှုလည်း မရှိတော့ဘူး။ အချိန်ကြာလေ သူမကို တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားအရ သူဆက်ဆံနေရတယ်လို့ သူထင်လာလေဖြစ်တယ်။ သူမအပေါ် သူငြီးငွေ့လာခဲ့တယ်။ အထူးသဖြင့် သူ့အလုပ်မှာ အသစ်ဝင်လာတဲ့ သွက်သွက်လက်လက် ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကြောင့် ဖြစ်တယ်။ ကောင်မလေးက သူ့ကို ရှုးသွပ်စေခဲ့တယ်။ ဒါဟာ သူ့ရဲ့ဒုတိယအရွယ် စိတ်လှုပ်ရှားခြင်းလို့ သူထင်ခဲ့တယ်။
အကြိမ်ကြိမ် တွေးတောဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် သူမနဲ့ကွာရှင်းဖို့ သူဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ဒီလိုခံစားချက်မျိုးက သူမအတွက် ထုံကျင်နေပါပြီ။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ သူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကို သူမခေါင်းညိတ်ခဲ့တယ်။ နှစ်ဦးသား တရားရုံးသွားပြီး ကွာရှင်းခဲ့ကြတယ်။ ကွာရှင်းစာချုပ်ပေါ်မှာ လက်မှတ်ထိုးပြီး ရုံးကနေ သူတို့ထွက်လာကြတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး သူတစ်လမ်း ကိုယ်တစ်လမ်း လွတ်လပ်သူတွေဖြစ်သွားကြပြီ။ ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်မှန်းမသိ သူ့စိတ်ထဲမှာ ဟာတာတာခံစားနေရတယ်။ သူမကို သူတစ်ချက်ကြည့်ပြီး….
“ကောင်းပြီလေ… “ကွာရှင်းဟိုတယ် (Divorce hotel)” ဆိုတဲ့ စားသောက်ဆိုင်အသစ် ဖွင့်ထားတယ်လို့ ကြားတယ်။ အဲဒီ”ကွာရှင်းဟိုတယ်”က ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးစ ဇနီးမောင်နှံတွေ နောက်ဆုံးတစ်နပ်အတွက် သီးသန့်ဖွင့်ထားတဲ့ ဟိုတယ်ပါတဲ့။ အဲဒီမှာ သွားစားရအောင်” သူ့ကိုတစ်ချက်ကြည့်ပြီး သူမပြောတယ်။
သူခေါင်းညိတ်ပြီး နှစ်ဦးသားနှုတ်ဆိတ်လို့ ဟိုတယ်ထဲ ရှေ့ဆင့်နောက်ဆင့် ၀င်သွားကြတယ်။
“မင်း မှာကွာ” သူမကို ကြည့်ပြီး သူပြောလိုက်တယ်။
“ကျွန်မ အပြင်သိပ်မထွက်တော့ ဒါတွေကို မသိဘူး။ ရှင်ပဲ မှာပါ” သူမခေါင်းခါပြီး ပြောတယ်။
“ဆောရီး….. ကျွန်မတို့ ကွာရှင်းဟိုတယ်မှာ စည်းကမ်းတစ်ခုရှိတယ်။ ဒီညစာကို မိန်းမဖြစ်သူက ယောက်ျားကြိုက်တတ်တာတွေ မှာပေးရသလို ယောက်ျားဖြစ်သူကလည်း မိန်းမကြိုက်တတ်တာတွေကို မှာပေးရပါတယ်။ ဒါကို “နောက်ဆုံးအမှတ်တရ” လို့ ခေါ်ပါတယ်”
“ကောင်းပြီလေ” ဆံပင်ကို သူမသပ်တင်ပြီး ဟင်းတွေမှာလိုက်တယ်။
“ငါးပေါင်းတစ်ပွဲ၊ မှိုကြော်တစ်ပွဲ၊ မှိုနားရွက်သုပ်တစ်ပွဲ.. ဒီဟင်းတွေအားလုံး ဂျင်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြု မထည့်နဲ့နော်။ ကျွန်မအမျိုးသား….အော်.. ဒီအမျိုးသားက အဲတာတွေမစားဘူး”
“လူကြီးမင်းကရော ဘာမှမလဲ?” ၀န်ထမ်းက သူ့ကိုကြည့်ပြီး မေးတယ်။
တခဏလောက် သူငေးကြောင်သွားမိတယ်။ လက်ထပ်ပြီး (၁၀)နှစ်မှာ ကိုယ့်မိန်းမဘာကြိုက်တတ်မှန်း သူမသိခဲ့ဘူး။ ပါးစပ်ကြီးဟပြီး သူဘာပြောရမှန်း မသိဖြစ်နေခဲ့တယ်။
“ဒါတွေပဲ လုပ်ပါ။ အဲဒီဟင်းက ကျွန်မတို့နှစ်ယောက်စလုံးကြိုက်တဲ့ ဟင်းပါ” သူ့အဖြစ်ကို သူမက အလျင်အမြန် ၀င်ကယ်တယ်။
၀န်ထမ်းကောင်မလေးက ရယ်ပြီး “တကယ်တမ်းပြောရရင် ကျွန်မတို့ ကွာရှင်းဟိုတယ်ကို နောက်ဆုံးအကြိမ် ညစာလာစားကြတဲ့ ဇနီးမောင်နှံတွေက ဘာမှ စားချင်စိတ်ရှိကြတော့တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီ”နောက်ဆုံးအမှတ်တရ” ကို မစားကြတော့ဘဲ ကျွန်မတို့ဟိုတယ်က ကွာရှင်းသူတွေအတွက် အထူးစီမံထားတဲ့အအေးကိုပဲ သောက်ကြရအောင်၊ ကျွန်မတို့ဟိုတယ်ကို ရောက်လာသူတိုင်းက ဒါကို မငြင်းဘဲ မှာကြတယ်”
“အင်း.. ဒါဆိုလည်း အအေးပဲ မှာကြတာပေါ့” သူတို့နှစ်ဦးစလုံး ခေါင်းညိတ်ပြီး ပြောတယ်။
သိပ်မကြာဘူး။ ၀န်ထမ်းကောင်မလေးက အအေးနှစ်ခွက်လာပို့တယ်။ တစ်ခွက်က ရေခဲပါတဲ့ အပြာနုရောင်အရည်ဖြစ်ပြီး တစ်ခွက်က အငွေ့ထောင်းထောင်းထနေတဲ့ အနီရောင်အရည်ဖြစ်တယ်။
“ဒီအအေးတွေကို “မီးတောက်တစ်ဝက်၊ ပင်လယ်ရေတစ်ဝက်” လို့ခေါ်တယ်။ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ”
၀န်ထမ်းကောင်မလေးက ပြောပြောဆိုဆို နေရာကခွာတယ်။ အခန်းတစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်နေတယ်။ နှစ်ယောက်သား မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိုင်ပြီး ဘာပြောရမှန်းမသိ ဖြစ်နေကြတယ်။
“တောက်… တောက်.. တောက်”
“လူကြီးမင်း… သူ့ကို ပထမဆုံးအကြိမ် ပန်းစည်းလက်ဆောင်ပေးတဲ့အဖြစ်ကို မှတ်မိသေးလား? အခု အရာအားလုံးက ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြီ။ လင်မယား မဟုတ်တော့လည်း သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုလို့ရတယ်။ သူ့ကို နှင်းဆီတစ်ပွင့် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါဦး”
သူမတစ်ကိုယ်လုံး တုန်လှုပ်သွားမိတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့(၁၀)နှစ်က သူပန်းစည်းပေးတဲ့ ပုံရိပ်တွေကို သူမမြင်ယောင်လာမိတယ်။ အဲဒီတုန်းက ဆွေမရှိ၊ မျိုးမရှိတဲ့ သူစိမ်းမြို့မှာ သူတို့ဘာမှမရှိခဲ့ဘူး။ အရာအားလုံး သုညကစခဲ့ကြတယ်။ နေ့လယ်နေ့ခင်းမှာ နေရာအနှံ့ သူတို့အလုပ်လိုက်ရှာကြတယ်။ ရုန်းကန်ကြတယ်။ ညအခါ ညဈေးမှာ သူမဈေးရောင်းထွက်သလို သူက စားသောက်ဆိုင်မှာ ပန်းကန်ဆေးတယ်။ ညနက်သန်းခေါင်ရောက်မှ ငှားနေတဲ့ ၁၀ပေပတ်လည် အခန်းကျဉ်းထဲ သူတို့ပြန်ခဲ့ကြတယ်။ နေ့ရက်တွေကို ခက်ခက်ခဲခဲ ပင်ပင်ပန်းပန်း ဖြတ်ကျော်ခဲ့ရလည်း သူတို့ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတယ်။
အဲဒီမြို့ကိုရောက်တဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ချစ်သူများနေ့မှာ သူမအတွက် သူ ပထမဆုံးအကြိမ် နှင်းဆီအနီရဲရဲတစ်ပွင့် လက်ဆောင်ပေးတယ်။ သူမ မျက်ရည်ကျအောင် ပျော်ရွှင်ခဲ့မိတယ်။
(၁၀)နှစ်တိုင်ခဲ့ပါပြီ။ သူတို့ဘ၀ အရာအားလုံး ပြည့်စုံလာချိန် လမ်းခွတစ်နေရာမှာ သူတို့ရောက်နေခဲ့တယ်။ အတိတ်ကအကြောင်းတွေ တွေးရင်း သူမ မျက်ရည်ကျမိတယ်။
“မလိုတော့ပါဘူး…” လက်ကာပြပြီး သူမပြောတယ်။
“လိုတယ်.. ပန်းယူမယ်” လက်ပြပြီး သူပြောတယ်။
၀န်ထမ်းကောင်မလေးက နှင်းဆီတစ်ပွင့်ကိုယူပြီး နှစ်ပိုင်းခွဲလိုက်တယ်။ ပြီးနောက် ပွင့်ဖတ်တွေကို သူတို့ရဲ့အအေးခွက်ထဲ ပစ်ထည့်လိုက်တယ်။ ပွင့်ဖတ်တွေက အအေးထဲပျော်ဝင်ကုန်တယ်။
“ဒီနှင်းဆီပွင့်က ကျွန်မတို့ ဟိုတယ်က ကောက်ညှင်းနဲ့ အထူးပြုလုပ်ထားတဲ့ နှင်းဆီတွေပါ။ ဒါဟာလည်း လူကြီးမင်းတို့အတွက် တတိယမြောက် စားစရာတစ်ခုပါပဲ။ ဒါကို “ရောင်ပြန်အလှ” လို့ခေါ်တယ်။ လူကြီးမင်းတို့ ဖြေးဖြေးသုံးဆောင်ကြပါ။ လိုအပ်ရင် ကျွန်မကိုခေါ်လိုက်ပါ”
“xx…ဟို…. မောင် ……”
သူ့အသံတွေ လည်ချောင်းဝမှာ ပျောက်နေတယ်။ သူမလက်ကို သူဖမ်းဆုပ်လိုက်တယ်။ သူမလက် လှုပ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် မရုန်းမိဘူး။ နှစ်ဦးသား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မျက်နှာချင်းဆိုင်ကြည့်နေကြတယ်။ ဘာမှ မပြောဖြစ်ကြဘူး။
ရုတ်တရက် မီးမှိတ်သွားတယ်။ အခန်းတစ်ခုလုံး မှောင်အတိကျသွားတယ်။ အပြင်က အရေးပေါ်ခေါင်းလောင်းသံ မြည်လာပြီး အခန်းထဲ မီးခိုတွေ လှိမ့်ဝင်လာတယ်။
“ဟိုတယ် မီးလောင်နေတယ်ဗျို့။ အားလုံး လုံခြုံရေးလမ်းညွှန်ဘက် အမြန်သွားကြပါ”
“မောင်…. ကျွန်မကြောက်တယ်!” သူ့ရင်ခွင်ထဲ သူမတိုးဝင်လိုက်တယ်။
“မကြောက်နဲ့… မောင်ရှိတယ်။ လာ… အပြင်ကို ထိုးထွက်ရအောင်” သူမကို တင်းတင်းပွေ့ပြီး သူပြောတယ်။
အပြင်ကိုရောက်တော့ အပြင်ကမီးရောင်နဲ့လင်းနေတာကို တွေ့လိုက်တယ်။ ဘာမှမဖြစ်ပျက်ခဲ့သလို အရာတိုင်းက သူ့နေရာနဲ့သူရှိနေတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ ၀န်ထမ်းကောင်မလေးရောက်လာပြီး…
“ဆောရီး… လူကြီးမင်းတို့ကို ထိတ်လန့်စေခဲ့ပြီ။ ဟိုတယ်ကြီး မီးမလောင်ပါဘူး။ အခန်းထဲ မီးခိုးတွေကို တမင်လွတ်ခဲ့တာပါ။ ဒါဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ စတုတ္ထမြောက်ဟင်းပါပဲ။ ဒါကို “ရင်ထဲက ရွေးချယ်ခြင်း” လို့ ခေါ်တယ်။ အခန်းထဲ ပြန်ဝင်နိုင်ပါပြီ”
အခန်းထဲ သူတို့ပြန်ဝင်လာခဲ့ကြတယ်။ အခန်းထဲမှာ ပကတိအတိုင်း မီးရောင်နဲ့လင်းနေတယ်။ သူမကို သူဆွဲပွေ့ပြီး…
“ဟန်နီ… ၀န်ထမ်းကောင်မလေး ပြောတာမှန်တယ်။ အခုနားက ဟန်နီနဲ့မောင်ရဲ့ တကယ့်ရင်ထဲက ရွေးချယ်တာတွေဖြစ်တယ်။ တကယ်တော့ မောင်တို့နှစ်ယောက် တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် မခွဲနိုင်ကြဘူး။ မနက်ဖြန် မောင်တို့မင်္ဂလာပြန်ဆောင်ကြရအောင်ကွာ”
“မောင် ဆန္ဒရှိလို့လား?” နုတ်ခမ်းကိုက်ပြီး သူမမေးတယ်။
“ဆန္ဒရှိတာပေါ့။ အခု ဘာမဆို မောင်နားလည်သဘောပေါက်လာပြီ ဟန်နီ။ မောင်တို့ မနက်ဖြန် အစောကြီး မင်္ဂလာဆောင်ရအောင်ကွာ။ ရှင်းမယ်ဟေ့….” ပြောပြောဆိုဆို ၀န်ထမ်းကောင်မလေးကို သူလှမ်းအော်လိုက်တယ်။
“လူကြီးမင်းတို့နှစ်ယောက်အတွက် ဒါဟာ ဒီဟိုတယ်ရဲ့နောက်ဆုံးလက်ဆောင်ပါ။ ဒါကို “ထာဝရတောင်းခံလွှာ” လို့ခေါ်တယ်။ နှစ်ယောက်လုံး ထာဝရသိမ်းထားပေးပါ”
“ဘာဖြစ်တာလဲ?” သူမ စိုးရိမ်တကြီးမေးတယ်။
“ဟန်နီ… မောင်မှားပါတယ်။ မောင်တောင်းပန်ပါတယ် ဟန်နီ” စာရွက်ကို ကမ်းပေးရင်း သူပြောတယ်။
စာရွက်ကို သူမကြည့်လိုက်တယ်။ စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးထားတာက…….
သင့်အတွက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ နုပျိုခြင်းတွေ….
“မောင်…. မောင်လည်း ပင်ပန်းပါတယ်။ ဒီနှစ်တွေမှာ မောင်ကို ကျွန်မ လျစ်လျူရှူမိခဲ့တယ်”
လက်ထဲကစာရွက်ကို သူမကမ်းပေးပြီး ပြောတယ်။ စာရွက်ကို သူကြည့်လိုက်တယ်။ စာရွက်ပေါ်မှာ ရေးထားတာက….
ယောင်းမ၊ ယောက္ခမတွေအတွက် တာဝန်တွေ
မိသားစုအတွက်၊ သားသမီးအတွက် မေတ္တာတွေ….
နှစ်ယောက်သား တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ပွေ့ဖက်ပြီး သူတို့ငိုမိကြတယ်။ ငွေရှင်းပြီး ဟိုတယ်မန်နေဂျာကို သူတို့ကျေးဇူးတင် စကားပြောကြတယ်။ အဲဒီနောက် တစ်ယောက်လက်ကိုတစ်ယောက်တွဲပြီး ဟိုတယ်က သူတို့ထွက်ခဲ့ကြတယ်။ ပျော်ရွှင်သွားကြတဲ့ သူတို့နောက်ကျောပုံရိပ်ကိုကြည့်ပြီး ဟိုတယ်မန်နေဂျာ ခေါင်းတဆတ်ဆတ်ညိတ်နေတယ်။
“သိပ်ပျော်စရာကောင်းတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ ကွာရှင်းဟိုတယ်က မိသားစုတစ်စုကို ကယ်တင်လိုက်ပြန်ပြီ”
မူရင်း–google search or http://blog.jxwmw.cn/u/3747/archives/2009/17838.html
ကောင်းလိုက်တာ .. သိပ် ကြိုက်တယ် .. တစ်ကယ် မေ့နေတာတွေ ပြန်မြင်လာအောင် .. မလုပ်မဖြစ် အလုပ်တွေ မမေ့သွားအောင်လို့ .. ကျေးဇူး ကုဋေကဋာပါ ..
အရမ်းကောင်းတဲ့ ၀တ္တုတိုလေးပါ..။ မနိုင်းနိုင်းစနေ ရော တင်ပြသူကိုပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီလို စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့ ဇာတ်လေးတွေထပ်မြင်ချင်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ…. အရမ်းကောင်းတဲ့စာစုလေးပါ… ဒီစာထဲမှာ ပါတဲ့ ဟိုတယ် မျိုး မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရင် ကျွန်တော်တို့ တွေ့ နေရတဲ့ သတင်းစာထဲ က ကွာရှင်း ပြတ်စဲခြင်းဆိုတဲ့စာမျက်နှာတွေ ပျောက်သွားမှာပဲ နော်….
ကျွန်မအတွက်တော့ တစ်စုံတစ်ယောက်သောသူကို သိစေချင်တယ်။
ဒါဟာ သင့်ဇနီးမယားပဲဖြစ်တယ်။ ”
အ၇မ်းကိုကောင်းတဲ့ story တစ်ပုဒ်ပါ။ အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးလာတာနဲ့အမျှ တစ်နေ့တာရဲ့ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုနဲ့ အတူ အချစ်တွေ လျော့ပါး ပျက်ပြယ်တတ်ပါတယ်။ ဒီ story က အချိန်ယူပြီး မိမိတို့ရဲ့ အချစ်ကိုပြန်လည် လန်းဆန်း နုပျိုလာအောင် ပြုလုပ်ဖို့ လိုအပ်ချက် ကို ထောက်ပြသွားပါတယ်။ အရမ်းကြိုက်ပါတယ်။
သားသမီးတွေကို ဘ၀မြင့်အောင်လုပ်ပေးဘို့ ရုန်းကန်နေရင်းကနေ
ကိုယ်စခဲ့တဲ့အချစ်တွေကို မေ့သွားကြတော့ ပြသနာတွေတက်ကုန်တာပေါ့။
လင်ကွာ မယားကွာ စပယ်ရှယ်လစ်ရှေ့နေတွေကတော့ ဒီဟော်တယ်မျုိးကို ကြိုက်မယ်မထင်ဘူးနော်။
ရုံးတော်က နှစ်ကြိမ်မြောက်ဆင်းလာ ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးနားထောင်ဖူးတယ်
အဲဒီသီချင်းထဲကလိုပဲ လင်ကွာမယားကွာ တွေ ဖြစ်မှာ အရမ်းကြောက်တယ်
ဘယ်လောက်ပဲ ဒေါသထွက်ထွက် စိတ်ဆိုးဆိုး ကွာရှင်းပြတ်စဲတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ် ရောက်သွားမှာကိုတော့
ကြောက်တယ် ဒီအချိန်ထိ ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ဖူးသမျှမှာ မိသားစုကို အမက်မောဆုံးပဲ
ကျန်တာ ဘာပစ္စည်းဖြစ်ဖြစ် အဆုံးရှုံးခံနိုင်တယ်
အားလုံးမဟုတ်တောင် အများစုက ကျွန်တော်နဲ့တူမယ်ထင်တယ်
ဒီလောက်ကိုယ်မက်မောတဲ့ဘ၀ကို ဖျက်ဆီးပစ်တာ ဘာပြသနာပဲဖြစ်ဖြစ် မလုပ်သင့်ပါဘူး
ဘယ်လောက်ပဲ ကျပ်တည်းနေပါ့စေ မိသားစုကို အချိန်ပေးသင့်ပါတယ်
အိမ်ထောင်ရယ်လို့ထူထောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် ကိုယ်ဟာ ကိုယ့်အတွက်မဟုတ်တော့ဘူး
အရမ်းကောင်းတာဘဲ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေတဲ့ သူရော ပြေတဲ့ သူတိုင်းပါ ဖတ်သင့်တယ်..
တကယ်ကိုကောင်းတဲ့ စာမူလေး (1) ပုဒ်ပါပဲ … နောက်ထပ်လဲ ဒါမျိုးလေးတွေထပ်ဖတ်ချင်ပါတယ် ….
အိမ်ထောင်ရှိတဲ.သူတိုင်း ဒီstory ကို ဖက်သင်.တယ်။အရမ်း ကောင်းတယ်။ ပိုက်ဆံရှိရင်အဲ.လိုhotal open ချင်တယ်။